My iPhone 'Ike Jikọọ na App Store'! Nke a bụ The Real Idozi. - Iphone
kedu ka m ga -esi nweta ihuenyo ipad m ka ọ tụgharịa
iphone 6 agaghị ekwe ka m hichapụ foto
nwere ike jikọọ na ụlọ ahịa ngwa
ipad na -arịọ maka paswọọdụ iTunes
My iPhone 'Ike Jikọọ na App Store'! Nke a bụ The Real Idozi.
Storelọ Ahịa App anaghị arụ ọrụ na iPhone gị ma ị maghị ihe kpatara ya. Enwere mmelite ma ọ bụ ngwa ọhụụ ebe ahụ - mana ọ nweghị ike iru. N’isiokwu a, aga m eme ya na-egosi gị ihe ị ga-eme mgbe iPhone gị 'enweghị ike ijikọ na Storelọ Ahịa App' ma nyere gị aka idozi nsogbu ahụ maka ezi !
Gini mere iPhone m enweghị ike ijikọ na Storelọ Ahịa App?
Gị iPhone na-ekwu na ọ 'enweghị ike ijikọ na Storelọ Ahịa App' n'ihi na ejikọtaghị ya na Wi-Fi ma ọ bụ netwọk data cellular, nsogbu ngwanrọ na-egbochi Storelọ Ahịa App site na ibu, ma ọ bụ sava App Store dị ala.
Iji chọpụta ihe mere iPhone gị na-enwe nsogbu a, anyị ga-ahụ na:
Connected jikọọ na Wi-Fi ma ọ bụ netwọk data cellular.
Ntọala gị na-enye gị ohere ijikọ na Storelọ Ahịa App ma wụnye, melite, ma ọ bụ zụta ngwa.
Sava App Store na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na otu ma ọ bụ karịa n’ime ndị a anaghị arụ ọrụ, ọ nwere ike ịbụ ihe kpatara iPhone gị “enweghị ike ijikọ na App Store”. Nzọụkwụ dị n'okpuru ga-aza nke ọ bụla n'ime isi ihe atọ dị n'elu ma nyere gị aka dozie nsogbu nwere ike ngwanrọ ma ọ bụ nsogbu ngwaike.
kedu ihe sim adịghị mma
Gị iPhone ejikọtara na Wi-Fi Ma ọ bụ Data?
Nke mbu, ka anyi hu na ejiri iPhone gi na Wi-Fi ma obu netwok data cellular. Enweghị njikọ a pụrụ ịdabere na ya, Storelọ Ahịa App agaghị ebu ibu na iPhone gị.
Ka anyị malite site na ịlele iji hụ ma iPhone gị ejikọrọ na Wi-Fi. Gaa na Ntọala -> Wi-Fi ma hụ na mgba ọkụ na-esote Wi-Fi nọ n'ọnọdụ. ’Ll ga-amara na Wi-Fi na-agbanye mgbe mgba ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ!
N'okpuru ngbanwe ahụ, gbaa mbọ hụ na obere akara akara dị n'akụkụ aha netwọkụ Wi-Fi gị - ọ bụrụ na enwere, ị ga-ama na ijikọ na Wi-Fi.
iphone 6 ihuenyo ojii mana ọ ka dị
Ọ bụrụ na Wi-Fi dị ma enweghi akara nlele na-esote netwọk ọ bụla, kpatụ netwọk gị n'okpuru Họrọ otu network… na-abanye na gị Wi-Fi paswọọdụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji Data Cellular kama iji Wi-Fi, nke ahụ dịkwa mma! Gaa na Ntọala -> Cellular ma hụ na agbanwuru ihe na-esote Data Cellular na elu ihuenyo ahụ agbanwuru.
Otu aghụghọ kachasị amasị m iji mgbe iPhone enweghị m ike ijikọ na Storelọ Ahịa App bụ ikpochapụ ebe nchekwa Storelọ Ahịa.
Dị ka ngwa ndị ọzọ, App Store na-agba ọsọ site na ngwanrọ. Enwere ọtụtụ koodu nke na-agwa Storelọ Ahịa App otu esi arụ ọrụ na ihe ị ga-eme. Dị ka ị nwere ike iche, sọftụwia niile na-ewe oge iji zaghachi. Agbanyeghị, anyị chọrọ ngwa dịka App Store ka ị kwụnye n'otu ntabi anya, yabụ mmemme sọftụwia na-eji 'cache' enyere ha aka ịgba ọsọ ọsọ.
esi eweghachi ngwa mail na iphone
A 'cache' bụ nchịkọta nke faịlụ ndị a na-ejikarị eme ihe na-echekwa n'ụzọ ọ bụla na mgbe ị gara iji ha, ha na-ebu ngwa ngwa karịa faịlụ ndị ọzọ. Ọtụtụ kọmputa na mmemme dị iche iche na-eme nke a, site na ihe nchọgharị weebụ gị na kọmputa kọmputa gị.
O di nwute, faịlụ echekwara nwere ike mebie ma obu glitches. Ihichapu oghere na-enye Storelọ Ahịa App gị ohere ịmalite site na koodu ọhụrụ nke echebeghị.
Nke mbụ, mepee Storelọ Ahịa Ngwa - ọ dị mma ma ọ bụrụ na ọ na-ekwu 'Enweghị ike ijikọ na Storelọ Ahịa App'. Na-esote, pịa otu n'ime taabụ ise ugboro 10 na ngwa ngwa iji kpochapụ oghere Storelọ Ahịa App.
Won’t gaghị ahụ ọkwa na ihuenyo na-ekwu na ekpochapụla Storelọ Ahịa App. Yabụ, mgbe ịpị otu taabụ ugboro 10 n'usoro, mepee ngwa ngwa ngwa ma mechie App Store. Ọ bụrụ na iPhone gị ka na-enweghị ike ijikọ na Storelọ Ahịa App mgbe ịmegharịrị ya, gaa na nzọụkwụ ọzọ.
Lelee Peeji Ọnọdụ Ọnọdụ Apple
O kwere omume na ihe kpatara thelọ Ahịa App agaghị ebu ibu na iPhone gị bụ n'ihi na Storelọ Ahịa ahụ n'onwe ya na-enwe nsogbu. Ọ bụ ezie na ọ dị obere ka Storelọ Ahịa App gbadata, Apple nwere webpage raara onwe ya nye ka ị nwee ike lelee onodu nke App Store na ọrụ ha ndị ọzọ.
Storelọ Ahịa Ngwa bụ ọrụ izizi edepụtara na ibe a. Ọ bụrụ na ị hụ ntụpọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'aka ekpe nke Storelọ Ahịa App, nke ahụ pụtara na ọrụ ahụ na-arụ ọrụ.
mmelite na & t ụgbọelu
Nchọpụta nsogbu nsogbu software dị mkpa karịa
Ọ bụ ezie na o yighị, ọ ga - ekwe omume na iPhone gị “enweghị ike ijikọ na Storelọ Ahịa App” n'ihi nsogbu software dị omimi. Faịlụ sọftụwia nwere ike bụrụ nke emerụ emerụ, nke nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu.
Nke mbu, gbalịa ịtọgharịa ntọala niile, nke ga-eweghachite ihe niile dị na ngwa Ntọala ụlọ nrụpụta. Iji mee nrụpụta ahụ, mepee Ntọala wee pịa General -> Tọgharia -> Tọgharia Ntọala niile . Mgbe ahụ, kpatụgharịa Tọgharia Ntọala niile mgbe ọkwa nkwenye gosipụtara.
Ọ bụrụ na ịtọgharịa ntọala niile anaghị arụ ọrụ, ịnwekwara ike ịnwale na-eme a DFU weghachi na gị iPhone . A DFU weghachite erases ma regharịa koodu niile na iPhone gị, yabụ gbaa mbọ chekwaa ndabere nke data gị na mbụ!
Nsogbu akụrụngwa nwere ike
Na obere okwu, gị iPhone nwere ike a ngwaike nsogbu. Enwere obere poolu n'ime iPhone gị nke na-ejikọ ya na netwọk ikuku yana ngwaọrụ Bluetooth. Ọ bụrụ na ị na-enwe ọtụtụ nsogbu na Wi-Fi na Bluetooth n’oge na-adịbeghị anya , i nwere ike mkpa ka gị iPhone rụziri.
Nke mbụ, ị nwere ike ịnwale ịtọlite ​​oge atọrọ na atlọ Ahịa Apple gị iji hụ ma mmezi ọ dị mkpa n'ezie. Ọ bụrụ na iPhone gị chọrọ nrụzi ma AppleCare + kpuchie ya, Apple nwere ike idozi ya n'efu.
Anyị na-akwado Pulse , ụlọ ọrụ na-arụzi ekwentị ama nke ga-ezitere gị otu n'ime ndị ọrụ akaebe enyere aka na ya ga-edozi iPhone gị ozugbo.
Enweghị ike ijikọ na Applọ Ahịa App? Nsogbu adịghị!
’Ve dozie nsogbu ahụ na Storelọ Ahịa Ngwa ma ugbu a ị nwere ike ịga n'ihu ibudata ma wụnye ngwa ndị kachasị amasị gị. Oge ọzọ iPhone gị 'enweghị ike ijikọ na Storelọ Ahịa App', ị ga-ama otu esi edozi nsogbu ahụ. Daalụ maka ịgụ ma nweere onwe gị ịhapụ ajụjụ ọ bụla ị nwere ike ịnwe na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a!
mgbe otu nwoke susuo gị ọnụ n'egedege ihu